Hooyaday iyo lix walaalahay ah ISIS ayaa dishay, kadib Trump ayaa weydiiyey meeday hooyadaa? – Hagaag.com
Posted on 19 Luulyo 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump ayaa kula kulmay Aqalka Cad 27 qof oo ka badbaaday dhibaatooyinkii diimeed ee 17 waddan oo adduunka oo dhan ka dhacay.
Intii lagu guda jiray is araga oo qaatay 30-daqiiqo, oo ay ka soo qaybgaleen saxafiyiinta, Trump ayaa wuxuu ka codsaday kaqaybgalayaasha in ay soo bandhigaan waayo-aragnimadooda.
Dadka xaadiray shirka ayaa ka mid ahaa Yazidis Ciraaq, Kiristanka Myanmar, Vietnam, North Korea, Iiraan, Turkiga, Cuba, Eritrea, Nigeria iyo Suudaan, iyo Muslimiinta ka yimid Afghanistan, Suudaan, Pakistan iyo Vietnam.
Trump ayaa su’aal kaga naxsaday Nadia Murad oo ka soo jeeda Yazidis Ciraaq oo ku guuleysatay abaalmarinta Nobel-ka, asaga oo yaaban ayuu wuxuu weydiiyey”Waxaad ku guuleystay Nobel Prize, taas oo aan la rumeysan karin, maxaad ku muteysatay?”
Kadib Murad ayaa uga sheekeysay sidii ay u kala iibsadeen adoon galmo ahaan Ururka ISIS iyo sida ay ula kulanty kufsi, garaacid iyo jirdil kahor inta aanay ka baxsanin. Kadib markii lagu daaweeyey Jarmalka, waxay doortay inay dunida u sheegto musiibada ay la kulmaan gabdhaha Yazidi-ga.
“Ma aanan helin meel amaan ah oo aan ku noolaano, waxay dileen hooyaday iyo lixda walaalahay ah,” ayey tiri Murad.
Trump ayaa hadalka ka gooyey gabadha oo wuxuu ku yidhi, “Meeday hooyadaa iyo walaalahaa hadda?”.
Murad oo amakaagsan ayey tiri “Wey dhinteen, waa la dilay, waxay ku aasan yihiin qabuuro wadareed ee magaalada Sinjar, wali waxaan la dhibtoonaynaa inaan ku noolaano nabadgelyo, fadlan wax ka qabo,” Murad ayaa sidaas tiri.
“Waan ogahay meesha aad ka hadlayso si fiican, haa, aad ayay u adag tahay,” ayuu yiri Trump.
Muslimiinta Rohingya ayaa ka baxsanayey Myanmar saacadiiba 1500 qof.
Qaxootiyad Rohingya ah ayaa weydiisay Trump qorshihiisa ku wajahan 700,000 oo qaxooti Rohingya oo dhibanayaal u ah xadgudubyo ay geysteen ciidamada Myanmar.
Waxay tiri “Waxaan ahay qaxooti Rohingya ah oo ka timid xerada qaxootiga ee Bangladesh, qaxootiga badankiisa ayaa rajeynaya in ay guryahooda ku laabtaan sida ugu dhakhsaha badan, waa maxay qorshahaagu oo aad nagu caawineysid?”
“Halkee ayey ku taallaa Bangladesh?” Trump ayaa weydiiyay.
Waxaa soo dhex galay mid ka mid ah caawiyayaashiisa oo u sheegaya in ay jaar la tahay Burma.
Waxaa kaloo ka mid ahaa dadkii uu qaabilay Trump gabar ka mid ah gabdhihii Boko Haram ka afduubatay dalka Nigeria sanadkii 2014.